Chii chinonzi SEPE: chii chinoshanda chinoita uye nemabatiro atingaita | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi SEPE
Chokwadi iwe wakanzwa nezveSEPE kanopfuura kamwe, asi iwe ungatiudza izvo zvinowirirana zvinowirirana? Iwe unonyatso ziva here basa re sevhisi iyi uye kuti chii chaingakushandira iwe.
Kana iwe ukangoenda wakashama nekuti haugone kusarudza SEPE chii, ndeapi mashandiro ayo kana hukama uye kukosha kwainako kwauri, saka izvi zvatichangobva kutsanangura zvichakubatsira iwe kuti uzive zvese nezve uyu mufananidzo
1 Chii chinonzi SEPE
1.1 Ndiani "vateereri vateereri" veSEPE
2 Mabasa eSepe
2.1 Kuvandudzwa kwemitemo yebasa
2.2 Kufambisa pamwe nevamiriri vevashandi
2.3 Kurongeka kweMahofisi Mahofisi eMatunhu Akazvimirira
2.4 Dhatabhesi yekuvandudza
3 Hukama neSocial Security
4 Maitiro ekubata SEPE
Iyo SEPE ndiyo iyo chirevo cheState Public Employment Service, Mune mamwe mazwi, iri muviri une hukama neHurumende yeVashandi iri mukutarisira kurongedza marongero emabasa muSpain yese.
Iine mahofisi makuru ehurumende uye makumi mashanu nemaviri mahofisi ayo anoparadzirwa munyika yedu yese kuzivisa, kubata uye kutonga zvese zvine chekuita nebasa. Uye zvakare, ine akawanda akawanda kumeso-kumahofisi mahofisi ayo anoparadzirwa kumatunhu makumi mashanu eSpain pamwe neCeuta neMelilla.
Muchokwadi, zvinokwanisika kuti iwe waramba uchidana INEM kune izvi, uye wanga usiri kukanganisa. Nekudaro, iwo Mutemo weKushanda uyo wakaumbwa muna 2003 (uye wakagadziridzwa muna2015), wakakonzera yaimbova National Employment Institute (INEM) kuchinja zita rayo kuva State Public Employment Service, iyo yava kunzi SEPE.
Ndiani "vateereri vateereri" veSEPE
Iyo SEPE ishumiro inofanirwa kuve ne uye yenzanga. Dambudziko nderekuti nguva zhinji isu tinofunga kuti muviri uyu unongotarisira vanhu vari kutsvaga basa, asi hapana chimwezve. Uye hazvina kudaro.
Chaizvoizvo "vateereri vateereri" vayo yakawanda kwazvo. Kunyanya:
Vasina basa kana venguva refu vasingashandi vanotsvaga mukana webasa.
Vechidiki vari kuenda kunopinda mumusika wevashandi.
Vashandi vanoshanda, kungave kupindura mibvunzo, kupa dzidziso, kugadzirisa matambudziko evashandi ...
Vemabhizimusi. Kana iwe uine zano, unogona kuenda kuSEPE uko kwavanokuzivisa nezve makwikwi, rubatsiro kana kunyange nzira dzekutaurirana nevamwe vanogona kuita kuti iro bhizinesi zano riitike.
Makambani. Nekuti kuburikidza SEPE iwe unogona kufunga nezve kuhaya vashandi vebhizinesi rako.
Zvino zvaunoziva zvirinani zvirinani SEPE, pamwe nevanhu vainogona kubatsira, inguva yekuziva kuti ndeapi mashandiro ainayo, zvese zviri zviviri uye zvakanyanya.
Kazhinji, chinangwa cheSEPE ndechekuti «Batsira mukuvandudzwa kwebumbiro remabasa, gadzirisa dziviriro yekushaikwa kwemabasa uye vimbisa ruzivo pamusika wevashandi kuitira kuti ubudirire, pamwe nekubatana kweAutonomous Public Employment Services nevamwe vamiririri mumunda wevashandi, kuiswa nekugara zvachose musika wevashandi wevagari nekuvandudzwa kwehupfumi hwevanhu hwemakambani ”. Mune mamwe mazwi, inobata ne kuvhara uye kugutsa zvido zvevashandi zvevanhu veSpain.
Kuti uite izvi, une zvishandiso zvakati wandei. Izvi ndeizvi:
Kuvandudzwa kwemitemo yebasa
SEPE iboka rinokwanisa mupfungwa kuti riongorore musika wevashandi kuti uratidze marongero emabasa, kana zvimwe chete, kukudziridza maitiro ekuita basa rinobatsira basa munyika.
Kufambisa pamwe nevamiriri vevashandi
Nemajenti emabasa iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iwo anoreva kumakambani, ma freelancers, vashandi uye masangano. Dzese dzakabatana nehupenyu hwekushanda uye, nekudaro, dzinofanirwa kuverengerwa kuitira kuti pasave nekusaenzana, kana kurapwa kwakasarudzika mune mamwe mapoka.
Kurongeka kweMahofisi Mahofisi eMatunhu Akazvimirira
Chimwe chiitiko chekurongedza (kunyanya kuitira kuti pave nemitemo uye kuti iyi inoshanda kune wese munhu zvakaenzana), iri nemahofisi ainayo munharaunda dzakasiyana dzakazvimiririra, kusanganisira Ceuta neMelilla.
Uye ndeapi madhatabhesi? Zvakanaka inoreva rekodhi yakachengetwa yevashandi vese izvo zvakanyoreswa munyika, pamwe nemabasa, makambani, ... SEPE inokwanisa kuwana idzi data, pamwe neayo dhatabhesi.
Semuenzaniso, iwo mahofisi ane dhatabhesi evashandi veguta, kuitira kuti, kana paine kupihwa basa, vanokwikwidza vanogona kusarudzwa kuti vatumire kukambani uye vanogona kuitisa hurukuro kuti vaone kana vachiwana basa.
Hukama neSocial Security
Zvichida basa iri nderimwe rinozivikanwa kwazvo, uye iro rakabatana zvakanyanya neSEPE. Sezvatakambotaura, ndiyo inotarisira kuwanikwa kwevashandi uye kudiwa muSpain, asi iri hukama hwehukama neSocial Security. Sei?
Inopa makosi ekudzidzira. Iwo makosi ekudzidzira anoshanda kuitira kuti mushandi akwanise uye anogona kusarudza mikana iri nani yemabasa. Naizvozvo, svikira zvimwe zvinopihwa.
Manage kusashanda. Kana mushandi akashaya, SEPE ndiwo mutumbi unoona nezvekushomeka kwemabasa, kuibata nekuibata. Kunyangwe mushure meizvi, iwe unogona kuseta mamwe marudzi erubatsiro kune vasingashande pavanowana basa idzva.
Maitiro ekubata SEPE
Kana mushure mekuverenga zvese izvi iwe uchifunga kuti SEPE inogona kukubatsira zvine chekuita nemusika wevashandi, kungave nekuti urikutsvaga basa, nekuti iwe unoda vashandi, kana nekuti pane data rine hukama nebasa risinganyatso kujeka kwauri, kuziva maitiro ekubata navo kwakakosha kwazvo.
Iwe unofanirwa kuziva kuti fomu rekubatana neSEPE rakasiyana kwazvo. Zvinozivikanwa izvozvo ine mahofisi anodarika mazana manomwe akagoverwa mumatunhu makumi mashanu nemaviri eSpain Uye, nekudaro, iwe unogona kuenda iwe pachako kune chero emahofisi avo kunotsvaga kutungamira, kupindura mibvunzo, kutaura nezve mabhenefiti, nezvimwe. Mune zvimwe zviitiko, zvinotarisirwa kuti, pazvinhu zvakasiyana siyana, musangano wekutanga unokumbirwa kudzivirira mapoka evanhu kana kuti havagone kuenda kwauri nekukurumidza sezvaunoda.
Zvisinei, iyo yakatarisana-kumeso fomu haisi iyo yega. Ivo zvakare vane rubatsiro rwefoni runogoneswa. Chaicho:
Runhare kubatsira mugari, 900 81 24 00. Pamusoro pezvo, muhofisi yega yega vanewo nhamba yevagari vebasa (chimwe chinhu ndechekuti vanotora kubva kwauri).
Foni yekushandira makambani, 901 01 09 90, uko kusahadzika kunopindurwa uye data rinogona kutumirwa.
Pakupedzisira, iwe unogona kuwana iyo SEPE kuburikidza newebhusaiti yayo, kwaunogona kunyorera mabasa ebasa, mabhenefiti, ruzivo rwemabasa, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Chii chinonzi SEPE
Chii chandinoda kuita patent zano
Zororo rekuchengetwa kwevana